Shaqaalaha Apple waxay bixiyeen fasax si ay u helaan talaal | Waxaan ka socdaa mac
Apple, sida shirkado kale oo badan, waxay go'aansadeen inay u diraan dhammaan shaqaalaha guryahooda si ay uga shaqeeyaan meel fog. Hadda tallaalada ayaa laga heli karaa waddamada badankood, Apple waxay rabtaa in shaqaalahoodu awood u yeelan karaan inay aadaan tallaalka iyadoon laga jarin waqtiga ay u baahan yihiin inay ka sameeyaan mushaharkooda.
Laakiin, intaa waxaa sii dheer, waxay kaloo bixisaa fasax jira oo mushahar leh oo shaqaalahaas ah waayo-aragnimo waxyeellooyin sida uu sheegay Bloomberg. Apple, sida shirkadaha badankood, ma laha tallaal u gaar ah, sidaa darteed shaqaaluhu waa inay ballan ka qabsadaan xaruntooda caafimaad.
Xarunta Apple ayaa gebi ahaanba la xiray illaa gugii la soo dhaafay, iyada oo inta badan shaqaaluhu ay meel fog ka shaqeeyaan, sida magaalooyin kale oo badan oo Apple ay xarumo ku leeyihiin. Apple waxay rabtaa shaqaalaheeda inay bilaabaan acla soco muhiimadda tallaalka si loo awoodo in dib loo furo xarumaheeda.
Mid ka mid ah wareysiyadii ugu dambeeyay ee uu bixiyay Tim Cook, wuxuu ku sheegay in uusan sugi karin in shaqaaluhu shaqsi ahaan ugu soo laabtaan, maadaama jir ahaan looga baahan yahay qorshee iskaashi iyo ikhtiraac.
Hal-abuurnimadu had iyo jeer maahan waxqabad la qorsheeyay. Waxay ku soo dhaceysaa dadka kale maalintii oo dhan waxayna horumarineysaa fikrad aad hadda haysatay. Taasna waxaa lagama maarmaan u ah wadajir.
Bishii Maarso ee la soo dhaafay, Apple ayaa sheegatay taas ma jirin waqti kama dambeys ah oo ay shaqaalaha ku soo laabanayaan dhismahaSi kastaba ha noqotee, gobolka Kalifoorniya, dadka da'doodu ka weyn tahay 16 sano waxay awoodi doonaan inay ku tallaalaan ballan, laga bilaabo Abriil 15.
In kasta oo xaqiiqda ah in dhammaan Apple Stores ay albaabada u fureen adduunka oo dhan, haddana weli waxaa jira shaqaale badan oo jira iyagoo ka shaqeynaya meel fog guryahoodaJuunyo waa taariikhda Cook sheegatay sanadkii hore inay ahayd taariikhi ku habboon xerada Apple in mar labaad laga buuxiyo shaqaalaha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Shaqaalaha Apple waxay bixiyeen fasax si ay u helaan talaal
Remote-ka Apple TV waxaa laga yaabaa inuu ku jiro wajiga dib u qaabeynta